450W N'èzí Arena LED Flood Light China Manufacturer
Nkọwa:Egwuregwu Egwuregwu egwu,450W Na-aga n'ìhè Mmiri,Egwuregwu Egwuregwu Gburugburu
Home > Ngwaahịa > Egwuregwu egwu > Egwuregwu n&#39;èzí > 450W N&#39;èzí Arena LED Flood Light
Ihe Nlereanya.: BB-LD-450W-Q
Site na SMD 3030 LED, nke a 450W na- eduzi egwuregwu stadium na- emepụta ruo 58500lm dị elu (1200W Ebube Kwesịrị Ekwesị) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Egwuregwu Mkpụrụ Egwuregwu Baseball anyị bụ onyinyo n'enweghị onyinyo ma na-egbukepụ ọkụ, na-enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbakwunye ụlọ gị n'enweghị nchegbu banyere ụgwọ ọkụ eletrik dị elu. Nke a dị na 450w Baseball Stadium Lights nwere ike idozi ngwa ngwa iji kpuchie ebe buru ibu na ebe gbara ọchịchịrị n'emebighị ndị agbata obi gị nsogbu. Igwe M ast Light Bbier nwere nnukwu ụlọ ntanetị nke na-eme ka a ghara ịchọta ya ma hụ na ọ ga-eme ka ọkụ dị ọkụ na nhụsianya na-adịte aka. A na- ejizi ọkụ ọkụ a na-ahụ maka ọhụụ R nke a na-eme ka ọkụ dị ọkụ, nke pụtara na ọ na-eme dịka onye na-egbu egbu iji gbanyụọ okpomọkụ.
Anyị F ootball Field With Ìhè bụ awa 50,000, oge ndụ dị okpukpu 10 karịa oge ọdịda anyanwụ. Mkpụrụ mmiri IP65 maka mmiri mgbochi mmiri nke nwere ike mee ka ọ dị ka oghere ọkụ, ìhè ụgbọala, ìhè ụgbọala, ìhè egwuregwu, ụzọ ntụgharị ụgbọala wdg. Anyị 100% guzo site Bbier O utdoor Sport Court Lighting with free- worry 24-month warranty and 7 * 24 ọrụ ahịa enyi.
Igwe anaghị egbochi mmiri Ighalo na mmiri 500 Watt 65000LM Kpọtụrụ ugbu a
300W n'èzí Halogen Ledigharị Ìhè Mmiri Ejiji Kpọtụrụ ugbu a
Ìhè Mpaghara Mpaghara Led na 400W 3000K Kpọtụrụ ugbu a
Egwuregwu Egwuregwu egwu 450W Na-aga n'ìhè Mmiri Egwuregwu Egwuregwu Gburugburu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwu 640W Egwuregwu Egwuregwu egwu eji ere Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Led Egwuregwu Egwurugwu